Hotel ay Garoowe ka degan yihiin ergooyinka dooranaya xildhibaanada Puntland oo la weeraray | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Hotel ay Garoowe ka degan yihiin ergooyinka dooranaya xildhibaanada Puntland oo la weeraray
Kooxo hubaysan ayaa xalay weeraray mid ka mid ah hotelada ay magaalada Garoowe ka degan yihiin ergooyinka maanta lagu wado iney ka qeyb galaan doorashada xubnaha Puntland ku metelaya Xildhibaanada Aqalka Hoose ee baarlamanka Soomaaliya.
Sida dad goob-joogayaal ahi sheegeen kooxaha hubaysan ayaa rasaas ooda uga qaaday Hotelka ay degan yihiin qaar ka mid ah Ergeda beelaha taasoo si weyn looga maqlay magaalada Garoowe, iyadoo dableydan ay markiiba ka baxsadeen goobta.
Wararku waxay sheegayaan in weerarkan uusan geysan wax khasaare nafeed ah, balse khal-khal xoogan uu galiyey ergooyinka ka qeyb galaya doorashada la qorsheynayo inay maanta ka bilaabato magaalada Garowe.
Laamaha amaanka maamulka Puntland ayaan ka hadlin weerarkan oo noociisa aan looga baran magaalada Garoowe.
Weerarkan ayaa ku soo aaday xilli qaar ka mid ah beelaha Puntland ay cabasho xoogan ka muujiyeen habka loo soo xulay Ergooyinka iyo Musharaxiinta Puntland ee u tartamaya xildhibanada Aqalka hoose ee Baarlamanka Soomaaliya.